စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ သူမဖန်တီးတဲ့ MACRAME ကနေ အလှူငွေသိန်း(၆၀)ခန့်ရရှိခဲ့ကြောင့်ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ – Shwe Thadin
စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ သူမဖန်တီးတဲ့ MACRAME ကနေ အလှူငွေသိန်း(၆၀)ခန့်ရရှိခဲ့ကြောင့်ပြောပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
17/12/2021 T Z Revolution 2021 0
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ ဆရာဝန်မလေးချစ်သုဝေနဲ့ သူမရဲ့ခင်ပွန်းလင်းလင်းတို့ကတော့ လက်ရှိနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူ တစ်သား တည်း ရပ်တည်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းက သူတတ်ကျွမ်းတဲ့အနုပညာနဲ့ သီချင်းထုတ်လုပ်ပြီး ထိုသီချင်း ကရရှိတဲ့ငွေသား အကုန်လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်သလို ချစ်သုဝေကလည်း
သူမကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထား တဲ့ လက်မှုအနုပညာနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေအတွက် ရန်ပုံငွေလှူဒါန်းသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက သူမဖန်တီးတဲ့ Macrame ကနေ အလှူငွေသိန်း (၆၀) ရရှိခဲ့ကြောင်းကို “”I weave, you buy, we share, we care” #Trezamacrame ရဲ့ ပထမဆုံး projectလေးရဲ့ရလဒ်။
စောင်ရေ ၂၀၀လောက်မှန်းခဲ့တာ ၁၀၀၀ကျော် ခုထိလည်း ဝယ် နေကြဆဲပေမယ့် ၁၁၀၀ နဲ့ပိတ်ပေမယ့် ငွေလွှဲထပ်ပို့နဲ့ အမှတ်စဉ်1184 နဲ့ ” ၅၉သိန်း ၂သောင်းကျပ်” လှုခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ Get it on Google PlayStore ဆိုတဲ့ပုံလေးကို နှိပ် လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Cook Box ရဲ့ Playstore စာမျက်နှာကို ရောက် သွားပါမယ် …. Install ကိုနိပ်ပြီးဒေါင်းယူသုံးစွဲနိုင်ပါပြီ….. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မဲ၁၀၀၀ကျော်မှာ macrame လေးရနိုင်ဖို့ အခွင့်နည်းပေမယ့် လက်မှတ်ဝယ်သူအားလုံးဟာ လှူချင်လို့သာ ဝယ်ခဲ့ကြတာမို့ ကိုဇေရော ဝယ်ရဲခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေရော တကယ်ကျေးဇူးပါ။”“လိုအပ်တဲ့နေရာ၂ခု ကိုလွှဲလို့ပြီးစီးပြီးပါပြီ။ အမှတ်တရဖြစ်ဖို့ Treza’s macrame familyလို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ Macrame လေးတွေကို လစဉ် projectလေးတွေနဲ့လုပ်နေဦးမှာမို့ stay tune with us !!!!
မနက်ဖြန် 14th dec 6:30 pmမှာ trezaရဲ့ macrame ကံထူးသူကို ရွေးပြီးကြေငြာမယ် နော်..အမှန်တကယ်တော့ အားလုံးဟာကုသိုလ်ဆုတွေရပြီးသားပါ macrameလေးကတော့ အပိုဆုသာသာရယ်ပါ ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ ချစ်သုဝေကတော့ သူမဖန်တီးတဲ့ လက်မှု အနုပညာလေးကနေ အလှူငွေသိန်း ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အလှူရှင်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရင်း ပီတိဖြစ်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္၊ ဆရာဝန္မေလးခ်စ္သုေဝနဲ႔ သူမရဲ႕ခင္ပြန္းလင္းလင္းတို႔ကေတာ့ လက္ရွိေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူတူ တစ္သား တည္း ရပ္တည္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လင္းလင္းက သူတတ္ကြၽမ္းတဲ့အႏုပညာနဲ႔ သီခ်င္းထုတ္လုပ္ၿပီး ထိုသီခ်င္း ကရရွိတဲ့ေငြသား အကုန္လႉဒါန္းမွာ ျဖစ္သလို ခ်စ္သုေဝကလည္း
သူမကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထား တဲ့ လက္မႈအႏုပညာနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ကေလးေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြလႉဒါန္းသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ခ်စ္သုေဝက သူမဖန္တီးတဲ့ Macrame ကေန အလႉေငြသိန္း (၆၀) ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို “”I weave, you buy, we share, we care” #Trezamacrame ရဲ႕ ပထမဆုံး projectေလးရဲ႕ရလဒ္။
ေစာင္ေရ ၂၀၀ေလာက္မွန္းခဲ့တာ ၁၀၀၀ေက်ာ္ ခုထိလည္း ဝယ္ ေနၾကဆဲေပမယ့္ ၁၁၀၀ နဲ႔ပိတ္ေပမယ့္ ေငြလႊဲထပ္ပို႔နဲ႔ အမွတ္စဥ္1184 နဲ႔ ” ၅၉သိန္း ၂ေသာင္းက်ပ္” လႈခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ Get it on Google PlayStore ဆိုတဲ့ပုံေလးကို ႏွိပ္ လိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ Cook Box ရဲ႕ Playstore စာမ်က္ႏွာကို ေရာက္ သြားပါမယ္ …. Install ကိုနိပ္ၿပီးေဒါင္းယူသုံးစြဲႏိုင္ပါၿပီ….. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
မဲ၁၀၀၀ေက်ာ္မွာ macrame ေလးရႏိုင္ဖို႔ အခြင့္နည္းေပမယ့္ လက္မွတ္ဝယ္သူအားလုံးဟာ လႉခ်င္လို႔သာ ဝယ္ခဲ့ၾကတာမို႔ ကိုေဇေရာ ဝယ္ရဲခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြေရာ တကယ္ေက်းဇူးပါ။”“လိုအပ္တဲ့ေနရာ၂ခု ကိုလႊဲလို႔ၿပီးစီးၿပီးပါၿပီ။ အမွတ္တရျဖစ္ဖို႔ Treza’s macrame familyလို႔ေရးလိုက္ပါတယ္။ Macrame ေလးေတြကို လစဥ္ projectေလးေတြနဲ႔လုပ္ေနဦးမွာမို႔ stay tune with us !!!!
မနက္ျဖန္ 14th dec 6:30 pmမွာ trezaရဲ႕ macrame ကံထူးသူကို ေ႐ြးၿပီးေၾကျငာမယ္ ေနာ္..အမွန္တကယ္ေတာ့ အားလုံးဟာကုသိုလ္ဆုေတြရၿပီးသားပါ macrameေလးကေတာ့ အပိုဆုသာသာရယ္ပါ ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။ ခ်စ္သုေဝကေတာ့ သူမဖန္တီးတဲ့ လက္မႈ အႏုပညာေလးကေန အလႉေငြသိန္း ေပါင္းမ်ားစြာရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အလႉရွင္ေတြအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရင္း ပီတိျဖစ္ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ထင်းစည်းလေးကို စားဝတ်နေရေးအတွက် ခေါင်းပေါ်ရွက်ကာ မြစ်ထဲတွင် ဖြတ်ကျော်ရင်း ဝင်ငွေရှာနေရသော အဖိုးအိုတစ်ဦး